आफ्नै प्रेमिकासंग होटल भित्र पसेका प्रेमीले…. आखिरमा यस्तो निर्णय किन गरे ? – Dainik Samchar
March 25, 2021 237
काठमाडौँ । प्रेम अ न्धो हुन्छ । खुशी हुँदा सबै कुरा जायज हुने प्रेममा जब प्रेमी प्रेमीका एक अर्कासँग ब्रे कअपको अवस्थामा पुग्छन् तब सबै कुरा उल्टो भइदिन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण भारतको लखनउरुमा देखिएको छ । जहाँ एक प्रेमीले आफ्नी प्रेमीकालाई होटलमा बोलाएर घाँ टी द बार ह त्या गरेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार रजनी खाँड शारदा नगरका शुभम वर्षाले आफ्नो आधार कार्ड दिएर होटलमा कोठा बुक गरेका थिए । बुधबार सभम र उनकी प्रेमीकाले ढोका नै नखोलेपछि होटलका म्यानेजरले प्रहरीलाई खबर गरेको आजतकले जनाएको छ ।
तत्कालै घ ट ना स्थल पुगेको प्रहरीले दुवै श वलाई नियन्त्रणमा लिएर पो .ष्ट मार्ट मका लागि पठाएको र सुरुवाती अ नुसन्धानमा सुभमले प्रेमीकाको ह त्या गरेको पाइएको छ । यस विषयमा प्र हरीले थप अनु सन्धान अगाडी बढाएको बताइएको छ ।
प्रेमी सुशभमले यस विषयमा आफ्नी आमालाई जानकारी दिएर यो कदम चालेको बताइएको छ । आमाले भक्कानिँदै भनिन् बाबु बुहारीलाई घर ल्याउ भनेकै थिए के गर्यौ यो, हामी बर्बाद भयौँ ।
यो पनि, २१ वर्षदेखि विदा नबसी काम गरिरहेको छुः भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू २१ वर्षदेखि बिना विदा देश र जनताका लागि क्रियाशील भएको दाबी गरेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मङ्गलबार बसेको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै बिदा नलिई काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
Prevकाका ससुरा र बुहारी छुट्टाछुट्टै स्थानमा मृतावस्थामा भेटिए
Nextपूर्व श्रीमान् अरबाज खानले दिए नायिका मलाइका अरोडालाई यस्तो उपहार, सेयर गरिन् भिडियो